YINTONI UPHAWU LWAM LWENYANGA? | I-LUNAR ASTROLOGY - UKUVUMISA NGEENKWENKWEZI
Eyona Ukuvumisa Ngeenkwenkwezi Yintoni Uphawu Lwam lweNyanga? (+Isibali-manani sasimahla seNyanga)
Umqondiso wakho weNyanga ulawula uvakalelo kwaye unokukubonisa okuninzi malunga neentlobo zamaqabane ozifunayo ebomini.
Kulungile-ke sele ufundile malunga nophawu lwakho lwelanga kodwa ayichazi ukuba kutheni ukhetha iNetflix kwaye uziphole phezu komdaniso wobusuku. Yintoni enika? Amathuba anjalo uphawu lwakho lwenyanga lunempembelelo enkulu kwiimvakalelo zakho, intuition, kunye nokunye. Uphawu lwakho lwenyanga luyinxalenye yobuntu bakho obugcinwe bufihliwe kwabanye. Esi sikhokelo siya kukunika isishwankathelo sendlela yokufumana kunye nokuqonda uphawu lwakho lwenyanga. Sebenzisa amakhonkco angezantsi ukutsibela phambili.
Ukufumana uphawu lwakho lwenyanga kulula! Faka nje usuku lwakho lokuzalwa, ixesha lokuzalwa, kunye nendawo esi sixhobo simahla ukusuka abahlobo bethu kwi-Astro-Charts ukufumana ikopi yetshathi yakho yokuzalwa yasimahla (kunye nophawu lwakho lwelanga):
Ungalufumana njani uphawu lwakho lweNyanga
Ngokuvumisa ngeenkwenkwezi, ukuma kwenyanga kunika owona mfanekiso ucacileyo kwiimvakalelo zomntu. Inyanga imele ubuyena bangaphakathi kunye nemo yeemvakalelo ohamba ngayo kwihlabathi. Ichaphazela kakhulu ubudlelwane bakho phakathi kwabantu, kunye nendlela obona ngayo ihlabathi elikungqongileyo.
INyanga ye-Aries bubuntu obunamandla ngokweemvakalelo kunye nomlilo. Abantu abanenyanga yabo kwi-Aries abanangxaki yokuchaza indlela abaziva ngayo kwaye bakholelwa ukuba unxibelelwano oluthe ngqo lungundoqo kubudlelwane obuyimpumelelo. Ngokungafaniyo nezinye iimpawu ezivumela iimvakalelo zabo ukuba zifihle ngaphantsi komhlaba, i-Aries Moon ikhetha ukuvakalisa ngokukhululekileyo iimvakalelo zabo kunye nokujongana nemiba ngokuthe ngqo. Ubume babo obuthe ngqo buhlala benziwe impazamo ngabanye njengobundlobongela okanye ukungqubana - kodwa amaxesha amaninzi kunokuba inyanga ye-Aries iqhutywe yinkanuko.
Iinyanga ze-Aries zikholisa ukuba necala lokungxama elikhokelela ekubeni batsibe kwiimeko kunye nobudlelwane ngaphambi kokuba balinganise ngokupheleleyo ukhetho lwabo. Bangabantu abathandana abanomdla nabathanda ukuhlamba amaqabane abo ngemiboniso emikhulu yothando kunye nezithembiso ezinkulu. Ukubuyisela, iNyanga ye-Aries idinga ukuba nomntu onokufanisa ukuthanda kunye namandla. Batsalela kumaqabane anokugcina indlela yokuphila ekhawulezayo i-Aries Moon idla ngokunqwenela.
I-Aries iyakuzonda ukubonwa njengobuthathaka, nto leyo eyenza kube nzima ukubeka enyangeni. Nangona besoloko besokola kukunxibelelana nokuvakalisa iimvakalelo zabo, abafane bafikelele kwabanye ukuze bafumane uncedo. Ngenxa yesi sizathu, abantu abanenyanga yabo e-Aries badibanisa kakuhle nezinye iinyanga zomlilo okanye abantu abanokubekwa kwenyanga yomoya. Bayakwazi ukuzimela ngokweemvakalelo kwaye bakholisa ukuba nomonde omncinci kwiimpawu ezixhomekeke ngakumbi ngokweemvakalelo. Kungathatha ixeshana ukwakha iqhina lokuqala kunye neNyanga ye-Aries, kodwa inokuba yimincili ngendlela emangalisayo kunye namaqabane athembekileyo ukuba unokuthimba ingqalelo yabo.
Abantu abaneNyanga yabo eTaurus ngabantu abasekelwe ngokweemvakalelo abadla ngokuba nobuntu obuthambileyo, obuphantsi ukuya emhlabeni. Ukuphepha ukutshintsha kunye neengxabano, iNyanga yeTaurus ikhetha ukuzinza komkhwa kunye nesiqhelo. Abalohlobo lomntu lokuyeka yonke into kwaye baqale ubomi obutsha kwelinye ilizwe. Ngezi zizathu, iiNyanga zeTaurus zihlala zibambekile kwisiqhelo okanye zithintele iindlela zokuziphatha ezibeka emngciphekweni ezinye iimpawu ezinokuzifumana ziyonwabisa. Inyanga yeTaurus ayilona uhlobo lokuthatha umngcipheko xa kuziwa eluthandweni. Ukuthandana bakujonga njengesivumelwano esisebenzisekayo nesothando.
Abantu abaneNyanga yabo eTaurus banokuba nenkani kakhulu xa kuziwa ekusingatheni ukungavisisani. Nangona bekhetha uxolo kunesiphithiphithi, inyanga yeTaurus ayiyi kubuya umva xa icelwa umngeni. Ngokungafaniyo neminye imiqondiso eya kubeka phambili imvisiswano yeqela ngaphezu kokuzingca, iiNyanga zeTaurus ziya kuma phantsi ukuba zibona ukungavisisani kubalulekile ngokwaneleyo. Ngesi sizathu, abantu abaneNyanga yabo eTaurus banokuzithemba kakhulu kwaye baqiniseke ngeziqu zabo kodwa banokuba nobunzima bokuhamba kwiincoko ezibalulekileyo zovakalelo.
Iinyanga zeTaurus zifuna ubudlelwane kunye namathuba abonisa isithembiso somvuzo wexesha elide. Ukhuseleko lwezemali lubaluleke kakhulu kwezi nyanga zoMhlaba kunye neTaurus ngokukodwa, baya kubeka phambili ukhuseleko lwezemali ngaphambi kwayo yonke enye into, kuquka iimfuno zabo zengqondo. Kodwa oku akumenzi iTaurus Moon ukuba izicingele - endaweni yoko aboyiki ukusebenza nzima ukuze baphile ubomi obutofotofo abathanda ukwabelana nabo nabo babathandayo.
Abantu abaneNyanga yabo eGemini bahlakaniphile, banomtsalane, kwaye bangabantu abanengqondo enzulu. Xa kuziwa kwiimvakalelo, iinyanga zeGemini zisondela kwizinto ngendlela enengqiqo, enenjongo. Badla ngokukhetha ukuzinzisa iiyantlukwano zabo ngokunamathela kwizibakala baze bafumane izisombululo kunokuba bathethe ngendlela imeko eye yabenza baziva ngayo. Njengemiqondiso emininzi yomoya, iinyanga zeGemini zithande ukukruquka. Akukho kwimeko yenyanga yomoya ukonwabela isiqhelo kwaye abantu abanenyanga yabo eGemini banokungaphumli okanye badikwe. Xa oku kusenzeka, iiNyanga zeGemini zidla ngokuba nobunzima bokugquma ukuqunjelwa kunye nokucaphuka.
Ngelixa ezinye iindawo ezibekwe kuzo zinokungena nzulu kwiimvakalelo zabo, iiNyanga zeGemini zinobuchule bokufunda nokucacisa iimvakalelo zabo. Iimvakalelo zinzima kwiinyanga zomoya kwaye ngelixa iinyanga zeGemini ziyamangalisa ekuqondeni iimvakalelo zabanye, ukuzazi ngeemvakalelo zabo kunokuba nzima kakhulu. Iinyanga zomoya zifuna indawo kunye nexesha lokucwangcisa ngokufanelekileyo indlela izinto ezibenza bazive ngayo.
Oku kothusa abantu abaninzi abadibana neeNyanga zeGemini kuba abo banenyanga yabo eGemini bakholisa ukuba ngabantu abathanda ukonwaba kakhulu. Bathanda ukutsala abanye ngokwendalo kwaye banobuntu obubavumela ukuba badibanise kuyo nayiphi na imeko. Kodwa kungenxa yesi sizathu ukuba iNyanga yeGemini inokuba nengxaki yokuvula kunye nokuzinza kwiimvakalelo zabo. Xa zinikwa ithuba lokuba sengozini, ezininzi iiNyanga zeGemini zihendwa yingcinga yokubaleka kwaye ziqale phantsi endaweni yoko. Oku kunokwenzeka ngenxa yokungaphumli kwaye ngamanye amaxesha iimpawu zomoya eziguquguqukayo ziba nazo.
INyanga ikwiplanethi yayo elawulayo kwiCancer, okuthetha ukuba abantu abanenyanga yoMhlaza banenqanaba eliphezulu lovakalelo lweemvakalelo kunye nengqiqo kunabanye. Oku kwenza ukuqonda iimvakalelo zabo kunye nabanye kube lula kakhulu kwiiNyanga zoMhlaza. Kwelinye icala, oku kubenza babe ngabaphulaphuli abakhulu kunye nabahlobo abanovelwano ngokulula nabanye. Kukwathetha ukuba abantu abaneNyanga yabo kuMhlaza kunokwenzeka ukuba bazive behlukanisiwe ziimvakalelo zabo ngokunjalo. Oku kubenza baphenjelelwe lula ziimvakalelo zabanye. Abantu abanenyanga yabo kwiCancer kufuneka babeke phambili izicwangciso ezibanceda bahlale beqinile ukuze baphephe ukulahlekelwa ngokwabo kubudlelwane babo phakathi kwabantu. Ngamanye amaxesha kuvakala ngathi akukho mntu wumbi onokuziqonda ngokwenene.
indawo enzima ikama ngaphezulu
Umhlaza udla ngokubizwa ngokuba luphawu lomama ngenxa yendalo yawo yokonga kwaye oku kunokukhokelela kwiimbono ezingezizo malunga nenyanga yoMhlaza. Abantu abaninzi benza impazamo yokucinga ukuba iCancers imo yeemvakalelo ilingana nobuthathaka beemvakalelo, kodwa okuchasene noko kuyinyaniso. Ngelixa iCancer ibeka phambili iimvakalelo zabanye ngaphezu kweyabo, banokubakhusela kakhulu abantu ababajonga njengezalamane zabo. Ngokufana noononkala omele umhlaza, abantu abanenyanga yomhlaza aboyiki ukuzilwela xa abantu ababathandayo besongelwa.
Abantu abanenyanga yabo kumhlaza basekhaya ngokumangalisayo kwaye banqwenela ukuzinza ngokweemvakalelo. Umhlaza luphawu lwamanzi lweKhadinali okuthetha ukuba banokuthi bathathe inyathelo ukuze baqhubele phambili ubudlelwane bothando kunye nobuhlobo obubenza bazive bekhululekile. Abantu beCancer baziva bekhuselekile xa beziva ngathi banokwabelana ngokukhululekileyo ngeemvakalelo zabo kunye neemvakalelo zabo ngaphandle kokugwetywa kwabanye. Yiyo loo nto amanzi kunye namaqabane omqondiso womhlaba ehambelana kakhulu nabantu abanenyanga yabo kwiCancer.
Abantu abanenyanga yabo eLeo banobubele, banesisa, kwaye banothando. Ngelixa abanye abantu benokwenza impazamo kwintshiseko yabo yendalo kunye nendalo ezenzekelayo yokungakhuli, iinyanga zeLeo zingabantu abanomdla entliziyweni. Kumntu onenyanga yakhe eLeo, ukuthandana ngumboniso kunye nombhiyozo. Lonke ithuba lithuba elitsha lokwenza iqabane labo lizive linqweneleka kwaye libelinye lohlobo. Nangona kunjalo, abantu abanenyanga yabo eLeo balindele la mandla afanayo kumaqabane abo othando. Ukuze uzive unqwenelekayo umntu onenyanga yakhe eLeo kufuneka azive ebhiyozelwa ngokulinganayo kwaye ethandwa.
Abantu abanenyanga yabo eLeo abathandi ukubotshwa; bakhetha inkululeko yokukhula, ukuhlola kunye nokuzonwabisa. Ngesi sizathu, iimpawu zoMlilo kunye nezoMoya zihambelana kakuhle nabantu abanenyanga yabo eLeo. Iimpawu zomhlaba kunye neempawu zamanzi zinokukufumanisa kunzima ukukholisa abo baneenyanga zomlilo ukubeka iingcambu kwindawo enye ixesha elide. Ukungakhuli ngokweemvakalelo kunokuba yingxaki kubantu abanenyanga yabo eLeo. Ukubekwa kwe-Leo kunokuthambekela kwimvakalelo ebuhlungu kwaye kaninzi bamfanyekiswe likratshi ukubona xa izenzo zabo zichaphazele abanye. Kubalulekile ukukhumbula ukuba le ndlela yokuziphatha ayiveli kwindawo yobubi kodwa kunokungaqondi malunga namagama obunzima anokuthwala kubudlelwane phakathi kwabantu.
Ukunyaniseka akuyonto omele uzikhathaze ngayo ngenyanga kaLeo. Ngenxa yokuba abantu abanenyanga yabo eLeo abathambekeli ekwabelaneni ngokugqithisileyo okanye ukuthetha ngeemvakalelo zabo ezinzulu kunye nezomntu unokuthemba ukuba xa inyanga yeLeo ivula kuwe ngokweemvakalelo, bayinyani. Kwaye nje ukuba wakhe intembeko kunye nenyanga kaLeo, abasokuze bakushiye uzibuza ukuba baziva ngantoni kanye kanye. Umceli mngeni uza kukwenza ukuba babeke ixabiso kwiimvakalelo zabo ngendlela efanayo naleyo bayixabisa ngayo inkululeko yabo.
Abantu abanenyanga yabo e-Virgo bayayixabisa ngakumbi iinkcukacha zobomi baziva bekhuselekile xa benikezela ngombutho kunye neenkcukacha. IVirgo luphawu loMhlaba oluguquguqukayo oluthetha ukuba babhetyebhetye kakhulu kwaye ngokungafaniyo nezinye iimpawu zoMhlaba azichasananga nokwahluka okanye ukutshintsha. Njengamaqabane Inyanga yeVirgo iphantsi kwesondlo xa ithelekiswa nokunye ukubeka kweNyanga kwaye ikhetha indawo ehambelanayo nenoxolo apho banokuzenzela khona indawo engcwele kunye nabo babathandayo.
Ngokungafaniyo neenyanga zamanzi ezikhetha ukubonisa icala labo lokukhulisa ngokudibana ngokweemvakalelo, iiNyanga zeVirgo zikhetha indlela esebenzayo. IiNyanga zaseVirgo ziziva zikhuselekile ngokweemvakalelo xa ziziva zifunwa. Izenzo zenkonzo zibaluleke kakhulu kwiNyanga yeVirgo zombini kunye nendlela ababonisa ngayo iqabane labo uthando kuzo zombini indlela abathanda ngayo ukuboniswa uthando ngamaqabane abo. Abantu abanenyanga yabo eVirgo ngabathandi abathozamileyo abakhetha izenzo ezincinci zokuzinikela kwemihla ngemihla kwizimbo zomzimba ezinkulu kunye nemiboniso yothando esidlangalaleni.
Ingqwalasela yabo kwiinkcukacha kunye nendalo esisiseko yenza kube lula kwiinyanga zeVirgo ukujongana neemeko zeemvakalelo ngokufanelekileyo. Oku kubenza babe bakhulu ekusombululeni iingxaki zokunxibelelana nabantu ezinokujikela kude kakhulu kwelinye icala. INyanga yeVirgo idla ngokuzikhathaza ngokugqithisileyo ngeemeko abangakwaziyo ukuzilawula kwaye banokugxeka bona kunye nabanye. Yiyo loo nto ukubekwa kwamanzi kuyimidlalo elungileyo yeenyanga zeVirgo, njengoko banomonde kunye nobukrelekrele beemvakalelo ukunceda iVirgo ukuba iziqonde ngcono.
Abantu abaneNyanga yabo eLibra banqwenela ukulungelelana ngokweemvakalelo kunye nokuvisisana kubomi babo. Ngenxa yokuba i-Libra yi-Cardinal air sign, abesabi ukuthatha nayiphi na into efunekayo ukuze kubuyiselwe ibhalansi kuyo nayiphi na imeko. I-Diplomatic kunye negqwesileyo ekuxoxweni, iiNyanga zeLibra zinekhono elikhethekileyo lokubona nayiphi na imeko ukusuka kumbono womnye umntu kwaye inokuhlala ibalwa ukuba inike iingcebiso ezinenjongo ezinceda iqela lilonke.
Le mfuno yoxolo kunye nemvisiswano, nangona kunjalo, inokubangela ukuba inyanga yeLibra ibeke phambili iimvakalelo zabo kunye nesidingo sokuvalwa. IiLibra zihlala zizibhaqa zidlala indima yomlamli. Abantu abanenyanga yabo eLibra bayasokola ukwabelana ngeemvakalelo zabo ukuba oko kuthetha ukwenza abanye bakhululeke. Basenokukhetha ukuba yimfihlo okanye ukucotha ukwabelana ngendlela abaziva ngayo de bayeke ukulinda. Abantu abanenyanga yabo eLibra nabo banotyekelo lokujonga isipili okanye bamkele iimvakalelo zabo babangqongileyo ukuze bagcine uxolo.
Nangona kunokuba lula ekuqaleni kwinyanga yeLibra ukutsala amaqabane, umzabalazo wabo wokuvula iimvakalelo unokubonisa iingxaki kamva kubudlelwane. Ngesi sizathu, umlilo kunye neenyanga zomoya zilungelelana kakuhle kwimingeni abantu abanenyanga yabo eLibra abanokujongana nayo. Enye inyanga yomoya inokuqonda umzabalazo weLibra ngokuthetha iimvakalelo zabo, ngelixa iNyanga yomlilo inokuyiqinisa iLibra ngokwaneleyo ukuba bavule kwaye babelane. Eyona ndawo inkulu yokukhula kwiinyanga zeLibra kukufumana ilizwi labo kunye nokufunda indlela yokuma ngokuqinileyo kwiimvakalelo zabo - nokuba oko kuthetha ukuphazamisa ukuhambelana kweqela.
INyanga iyingozi kwiScorpio, okuthetha ukuba kunzima kubantu abanolu kubekwa ukuba baphathe ubunzima beemvakalelo zabo zemihla ngemihla. Abantu abanenyanga yabo kwiScorpio babonakala beneemvakalelo zabo kunye phezu komphezulu kodwa ngaphantsi kukho ukugquma okukhulu okugqumayo ngaphantsi komhlaba. Iinyanga zeScorpio zoyika ukulahlwa ngokweemvakalelo kwaye zinokonganyelwa ziimvakalelo ezibukhali ezihlala zizifumana. Oku kunokukhokelela ekubeni inyanga yeScorpio ivalwe ngokweemvakalelo ekuqaleni kwaye kunokwenzeka ukuba ugcine amaqabane othandana kumgama weengalo ekuqaleni kobudlelwane.
Nje ukuba iNyanga yeScorpio ivakale ngathi uyifumene intembeko, nangona kunjalo, yenye yeempawu zothando kunye neemvakalelo. Iinyanga zeScorpio zikhupha ukuzithemba okuthe cwaka kodwa okunamandla ekunzima ukungahoyi. Bahlala beqaphela indalo yabo enomtsalane kwaye basebenzise oku ukuze bazuze xa bethandana. Nangona kunjalo, ngokungafaniyo neminye imiqondiso kunye nale charisma yendalo, iScorpio ayinamdla kangako wokuthandana kwaye inomdla kakhulu ekufumaneni umntu omnye onokuwaqonda kumanqanaba eemvakalelo anzulu.
IiNyanga zeScorpio zinamandla aphantse abe yingqondo yokuthatha umxholo weemvakalelo kwiisethingi zeqela, zihlala zihlala phakathi kwemigca yezinto ezingachazwanga phakathi kwabantu. Abantu abanenyanga yeScorpio ngabokuqala ukuba bathathe utshintsho kwimood kwaye banokuchaphazeleka kakhulu ngeemvakalelo ezingalunganga, iimvakalelo kunye neemvakalelo kunezinye iimpawu zeNyanga. Yiyo loo nto abantu abanenyanga yabo eScorpio banokuthi babambelele kwingqumbo kunye neemvakalelo ezidala ixesha elide kunokuba luncedo kubo. Ngesi sizathu, iiNyanga zeScorpio zihlala zifuna ixesha kude nabanye ukuze zisuse amandla adala kunye neemvakalelo zabo zamva nje.
Abantu abanenyanga yabo kwiSagittarius banethemba, banethemba, kwaye ngabantu abaqaqambileyo abanqwenela amava ahlukeneyo kubomi babo bonke. Njengophawu lomlilo oluguquguqukayo, iSagittarius iguquguquka ngakumbi ngotshintsho kwaye inqwenela ukuhlukahluka. Ngenxa yale Sagittarius uziva kakhulu ekhaya hayi kwindawo enye okanye nomntu othile, kodwa kunokuba xa banikwa isithuba sokuzulazula ngokukhululekileyo ukuhlola kunye nokwandisa ihlabathi labo ngaphandle imida.
Akunakwenzeka ukuba umntu onenyanga yakhe kwiSagittarius unohlobo oluthile. Akunakwenzeka ukuba batsaleleke kubuhle kwaye endaweni yoko batsaleleke ngakumbi kumntu onokubavuyisa ngendlela abangazange bayibone ngaphambili. Abantu abanenyanga yabo kwi-Sagittarius kufuneka bafune amaqabane anomlilo okanye iinyanga zomoya, njengoko le miqondiso inokuthi ikwazi ukuziqhelanisa ne-Lifestyle ehambahambayo i-Sagittarius ejikelezayo inqwenela.
Abantu abanenyanga yabo kwiSagittarius banokuzabalaza nokuba sesichengeni ngokweemvakalelo. Nangona kulula ukuba inyanga yeSagittarius ibe neemvakalelo, kunzima kubo ukwabelana nabanye ngezo mvakalelo. Bathanda ukuzama ukusingatha ubunzima bemicimbi kunye neemvakalelo zabo bodwa, bahlala besala ukuya kwabanye ukuze bafumane uncedo. Nangona inyanga yeSagittarius inokubona oku njengamandla, kubalulekile ukuba baqonde ukuba amandla okwenene avela ekuvulekeni kunye nabantu obakhathalelayo kunye nokubathemba abanye.
Abantu abanenyanga yabo eCapricorn bangabantu abanzulu, abagciniweyo, kwaye balumkile. Njengomqondiso weCardinal Earth, iiCapricorns zinomkhethe kwisenzo kuzo zonke iinkalo zobomi babo. Xa zidibaniswa nendalo yazo ephathekayo Iinyanga zeCapricorn ziyinkosi yokudala ubunyani bamaphupha abo ngokusebenza nzima kunye nokunyamezela. Zonke ezi zinto zondla kwiinyanga zeCapricorn ezilindelekileyo kubo bobabini kunye namaqabane abo. Abantu abanenyanga yabo eCapricorn bazithathela ingqalelo iimbopheleleko zabo njengamaqabane othando. Oku kunokubanika inkangeleko yokuba uptight okanye nzulu kakhulu ekuqaleni, kodwa abantu kunye nenyanga yabo Capricorn bakholelwa ukuba ubumnandi kunye romance ubuhlobo obuhle inokuyonwabela kuphela emva kokuba uxanduva lwemihla ngemihla zisingathwa. Kwaye abantu abanenyanga yabo eCapricorn baziva beneliseke kakhulu ngokweemvakalelo xa bengabantu abanokusingatha ezo zinto kubantu ababathandayo.
Musa ukujongela phantsi uburharha kunye nomtsalane wabantu abanenyanga yabo eCapricorn. Nangona bezibona njengabantu abanzulu kubomi bemihla ngemihla, oko akuthethi ukuba iCapricorn ayiyonwabeli ihlaya okanye inkampani elungileyo. Ngokungafaniyo neminye imiqondiso, abantu kunye nenyanga yabo eCapricorn bakhetha ukugcina izangqa zabo zobuqu zincinci kwaye zikholisa ukuba neqaqobana labahlobo abasondeleyo ababathembayo ngezona mfihlo zabo zobuqu.
Iinyanga zeCapricorn zixabisa imida ecacileyo kunye nolindelo oluyinyani. babeka phambili ukhuseleko kunye nokhuseleko ngaphezu kwayo yonke enye into kubudlelwane kwaye benza konke okusemandleni abo ukubonelela okufanayo kwiqabane labo. Abantu abanenyanga yabo eCapricorn kunokwenzeka ukuba bajongane ngokuthe ngqo nokungavisisani kwaye babambelele kwiinyani ezinokuthi ezinye iimpawu zifundeke njengengxabano. Kodwa kubantu abanenyanga yabo eCapricorn, indlela yokunxibelelana ilungele ukujongana, ukujongana, kunye nokuhambisa imiba edlulileyo. Iinyanga zeCapricorn zihamba kakuhle kunye nezinye iinyanga zoMhlaba okanye abantu abaneenyanga zamanzi.
Abantu abanenyanga yabo e-Aquarius bangabalulekanga ngokwengqondo abafuna inkululeko eninzi kunye nendawo. Ngokungafaniyo neminye imiqondiso eyoyikayo xa kucingwa ukuba bodwa, abantu abanenyanga yabo e-Aquarius bakhetha ukuba wedwa kuba ibanika ithuba lokukhulula nokulungisa ihlabathi elibangqongileyo. Eli xesha libanika ithuba lokucacisa iimvakalelo zabo kwaye baziguqulele ngendlela abanye abanokuqonda ngayo. Ukubekwa kwe-Aquarius kunamandla akhethekileyo kwaye abantu abanenyanga yabo e-Aquarius bayazi kakuhle ukuba la mandla aphembelela njani iimvakalelo zabo.
brad pitt iinwele ezinde
Xa kuziwa kwingxabano yeemvakalelo abantu abanenyanga yabo e-Aquarius bakhetha ukufuna izisombululo kwaye bahambe ngokukhawuleza imiba edlulileyo. Zonke ezinye iimpawu zinokukhetha ukuthetha ngendlela le meko ibenze baziva ngayo, abantu abanenyanga yabo e-Aquarius bakhetha ukuchitha ixesha labo befumana isisombululo ngokuthetha ngeemvakalelo zabo. Oku kubangelwa ngokuyinxenye kuhlalutyo lweempawu zomoya nendlela umoya oyiphembelela ngayo inyanga.
Njengomqondiso womoya osisigxina, i-Aquarius ayinakwenzeka ukuba itshintshe ingqondo yabo xa sele beyenzile. Abantu abanenyanga yabo kwi-Aquarius banokuqonda ngokucacileyo oko bakuxabisa kwiqabane kunye nento abayifunayo kubudlelwane kwaye bakhetha ukungachithi ixesha labo kwi-entanglements abaziyo ukuba ayiyi kusebenza kwixesha elide. Abantu abanenyanga yabo e-Aquarius abazibekeli phambili izinto ezifana nokuthandana kwaye bakhetha endaweni yoko bavumele ubomi babo buqhube ikhondo labo lendalo, bekholelwa ukuba baya kufumana enye xa ixesha kunye nemeko ilungile.
Abantu abazalwa kunye nenyanga yabo kwiPisces banokuchazwa njengabaphuphi bemini bokudala kunye nentwana yokuthandana. Njengophawu lwamanzi oluguquguqukayo, iPisces yeyona nto imanzi kwaye iguquguqukayo yeempawu zamanzi. Ngokungafaniyo ne-Scorpio enokuthi ihlale igxininiswe yimpembelelo yeNyanga, Abantu abanenyanga yabo kwiiPisces banamandla okufunda abanye. IiPisces nakweyiphi na indawo ebekwe kuyo zinekhono elikhethekileyo lokunqumla ingxolo kwaye zibone izinto njengoko zinjalo ngokwenene. Ukuze kusetyenziswe obu buchule ngokupheleleyo. Iinyanga zePisces ziya kufuneka zifunde ukuthembela kwingqondo yazo yesithandathu kwaye zibe nobukrelekrele bazo ngokweemvakalelo endaweni yokuyifihla.
Abantu abanenyanga yabo kwiiPisces banokuzabalaza ukubeka kunye nokugcina imida nabanye. Ngelixa abantu abanenyanga yabo kwiPisces bekwazi ukuqonda izinto ezikhuthaza abanye, ubuntu babo bovelwano buthanda ukoyisa intuition yabo, ibashiya bechatshazelwa kukukhohlisa. Abantu abanenyanga yabo kwiiPisces banokubeka ukubaluleka okuphakamileyo kwiimvakalelo zabo zihlala ziphosakele kwezinye iimpawu ezinokuthi zibonise imfuno yokujonga okwesibini kwimeko. Kubalulekile ukuba abantu abanenyanga yabo kwiiPisces bathembe ithuku labo lokuqala malunga nabantu.
Ukuqonda kwabo okunzulu kweemvakalelo kwenza ukuba iinyanga zePisces zibe nobubele, uvelwano kunye nophawu lothando. Ubume babo bokuyila bubenza babe ngamaqabane okudala kunye namaqabane othando ahlala echitha ixesha labo lesimahla bephupha iindlela ezintsha zokubonakalisa umbulelo wabo ngabantu ababathandayo. Ngenxa yesi sizathu, iNyanga yePisces iya kudibanisa kakuhle nezinye iinyanga zamanzi okanye iinyanga zomhlaba. Ukoyisa uvakalelo lwabo kunye notyekelo lokubeka amaqabane othando kwi-pedestal yindawo ephambili yokukhula kwabantu kunye nenyanga yabo kwiPisces. Ukukwazi kwabo ukuqonda iimvakalelo kubanika ithuba kubomi bothando obumangalisayo nobanelisayo, yiyo loo nto abantu abanenyanga yabo kwiPisces kufuneka babeke kuqala ukuzithanda ngaphambi kokuba banike uthando lwabo kwabanye.
Ngokufana necala elimnyama lenyanga, iindawo ezinzulu zobuntu bethu zifihlwe nzulu kwiiplanethi zethu zokuzalwa. Umqondiso wakho wenyanga yenye yeempembelelo ezininzi zokuvumisa ngeenkwenkwezi ebomini bakho.
iinwele eziphakamileyo kwaye eziqinileyo
ukunyuka uphawu lwezodiac
ukufunda itshathi yam yokuzalwa
apho iitattoos zibuhlungu kakhulu
ilanga liphuma inyanga
ilanga inyanga ukuphuma uphawu